Fikambanana Skoto eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Fikambanana Skoto eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy : Fahasamihafan'ny versiona roa
Fikambanana Skoto eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Martsa 2019 à 05:47
142 octets ajoutés , il y a 1 an
Sora-matevina sy tsipelina
Endrik'io pejy io tamin'ny 23 Janoary 2019 à 10:53 (hanova)
Endrika tamin'ity 14 Martsa 2019 à 05:47 ity (hanova) (esory)
k (Sora-matevina sy tsipelina)
Ny [[Fikambanana Skoto eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy|'''Fikambanana''' '''Skoto''' '''eto''' '''amin'ny''' '''Fiangonana''' '''Loterana''' '''Malagasy''']] (FS.FLM) dia sampana ao amin'ny [[Fiangonana Loterana malagasyMalagasy]] (FLM) izay misahana ny [[skotisma]] ao amin'io fiangonana io ka mitambatra ao ny Tily sy ny Mpanazava. Miandraikitra ny fomba fanabeazana ny zaza sy ny tanora araka ny fomban'ny skotisma izay mikendry ny haha olom-banona amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fanaovana asa soa ny fikambanana nefa tsy latsa-danja ny fitoriana ny [[Filazantsara]] sy ny fampianarana ny Foto-pinoan'ny Fiangonana Loterana Malagasy.
== Fielezan'ny fikambanana ==
Amin'ny maha sampam-pikambanana ao amin’ny FLM azy dia manaiky sy manaja ny rafitra sy ny fandaminana ary ny Lalampanorenana mifehy ny FLM ny FS.FLM. Synodam-paritany miisa 22 manerana ny Nosy ny FS.FLM ary misy any Eoropa koa ao amin'ny alalan'ny Synodam-Paritany Fiangonana Loterana Malagasy Eoropa (SP FLME) koa.
== Tanjon'ny fikambanana ==
Izao ny zava-kendren'ny FSFLM!:
* mandalina sy manamafy orina ny finoan’ny mpikambana araka ny [[Soratra Masina]];
* mitarika ny Mpikambanampikambana hijoro vavolombelon' i [[Jesosy|Jesosy Kristy]] eo anivon’ny mpiara-belona sy ny Fiangonana;
* mamolavola sy manefy toetra ahatonga ny mpikambana ho olom-pirenena vanona;
* mampiasa ny tànana mba hampivelatra ny saina amam-panahy;
== Fiombonana amin'ny fikambanana hafa ==
Miombona amin’ny fikambanana [[Mpanazava sy Tily Eto Madagasikara]] (MTEM) sy amin'ny [[Firaisan'ny Skotisma eto Madagasikara]] (FSM) koa ny FS.FLM, ka manaiky sy manaja ny rafitra sy fandaminana misy ao amin'izy ireo. Mifandray amin'ny ''World Organization of the Scout Movement'' ("Fikambanana iraisam-pirenen'ny fikambanana skoto") izy amin'ny alalan'ny FSM izay milambanamikambana amin'ity hetsikafikambanana iraisam-pirenena ity.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/969329"